Maansada Cadho Waalid Iyo Abwaan Xasan dhuxul Laabsaalax - Wargane News
Home Somali News Maansada Cadho Waalid Iyo Abwaan Xasan dhuxul Laabsaalax
Nimaad Dhashay Kuma Dhalin’ Waxaa la yidhi Soomaalidu been waa ay sheegtaa, beense ma maah-maahdo. Murtidaas, waxaan ku xusuustay oo Marag u ah Tixda Cadho Waalid ee Abwaan Xassan Dhuxul ‘Laabsaalax’. Waxaa ay soo baxday Iidii Soonfureed ee dhaweyd, waxaana ku ladhan sheeko dareen-taabad leh.
Qisada iyo maansada ka dhalatayba waxaa ay isa sanaaniyaan hal-qabsiga ah, ‘Nimaad dhashay kuma dhalin’. Waana ay is buuxinayaan marka aad u fiirsato ee u dhacdo macnaha.
Inta aanan Tixda soo fool-tabinin aan ku horeeyo gogol-dhiga Abwaan Xassan ku balaysimay curashadeedda. Waxaa uu yidhi Laabsaalax “Magaalada Ankara ee dalka Turkiga anoo jooga Ayaan maalin maalmaaha ka mida tegay Xaafada Kizlaay Maqaaxi Ku Taala oo Soomaalida magaalladaas degani u badan tahay. Waxaan ku biiray oo aan la fadhiistay dhowr dhalinyaro ah Miiz gaar ah isku waraysanaysa. Ilaa toban talaabo waxa noo jira- oday Somaaliyeed oo muuqiisu tabinayo xaaladdo is barkan oo ay ugu mudan yihiin da’, iyo Xanuun.
Odayga waxaa dhiniciisa taagan Wiil-dhalinyarro ah oo hadal u badan hiif iyo haaraan dudubinaya. Waxaanse fahmay inuu Odayga la hadlayo markii uu si kulul oo la wadda baqlo u yidhi isaga oo aan wax digigixasho ah lahayn, ‘Ee soo kac, hadaad meel fadhiyayso ood nasanayso ood xanuusanayso sariirtaadaan hurdi lahayde.” Markuu intaas yidhi ayaan u sii fiirsaday Odayga, Waxaan wax aann xaalad xanuun lagu suuray karro markiiba ka arkay Labadda adin (Cagood) oo aad u bararsanaa, Islamarkaana aan u qaatay ka sokow Cimriga uu jooggo inay sababta ugu weyn u yihiin talax-gabkiisa. Yarku ma aamusine waa uu sii wadday . ‘Kolba meel baan ku nasanayaa hana odhanne soo kac,’ intayadii meesha fadhiday mar baan la wada hadalnay – waxaan ku idhi waar maxaa kaa qaldan- maxaad odayga waayeelka ah sidan ula hadlaysaa- Waxoogaa intuu aamusay isagoo I waji gartay ayuu igu yidhi, ‘Waar aniga dhibaa I haysta. haduu laba talaabo qaado waan fadhiisanayaa ayuu leeyahay- jidkan haduu ka gudbo oo uu jidkaa u gudbo ma socon karro ayuu leeyahaye, bal Ii waydiiya haddii aanu socon karayn, Muxuu guriga u fadhiyi waayay, Runtii intaan odayga ka naxay, in aan ka yarayn ayaan inanka u Naxay ayaan cabaar waano ah u jeediyay.
Intii aan hadal ahaanta u idhi oo dhalinyaradda oo dhan ku wajahan. Islamarkaana, aan Hawraar ahaan u dhigay waxaa ay tahay.
Wali dunida maad caban
Qof la cawlan maad noqon
Kol albaabka sii celi
Dhado caal madaw iyo
Inad noqoto ciil tire
Waligii wax muu cunin,
Adoon caafmiaad qabin
Dhar cusayba muu gada
Colaad kaagamuu tagin
Culys heer kastuu yahay
Itaal –ceel kastuu dhigo
Xaajo kaa cawaran wali
Isagoo aan cuudiyo
Caana maal kumuu gabin-
Wuu dhaga cusladoo
Maaha cayka aad tahay
Hadii uu cag fududaa
Cararkana ku roonaa
Bari caafimaad qabay
Cilmiga iyo shareecada
Ma waxaad ka tahay caydh
Abahaa ma cudurkaad
Waalid caasi haw dhurun
Ikaar lagu casuumoo
Cara edeg laguma arag
Curashashada ul jabaysiyo
Maanad kaba cabsoonayn
Amad ciida miistoo
Xisku ku ciladdoobood
Maanad kaba cabaoonayn
Wuu tagi cadkaagani
Baribaad can buusnaan
Sida caday u dhuubane
Cawradaada dadan karin
Ku cuskanin inkaaruhu
Canbaarasan kuu garan
Ceeyoon labada dago
Ku casilo Ilaahay——-
Qallinka: M. Cumar
Daawo: Wasiirka Caafimaadka JSL Oo Kormeeray Goobaha Caafimaadka Ee Magaalada Caynaba
Dahabshiil Oo Dacwad Maxkamadeed Ku Furtay Doowlada Kenya